Shahaadada Bachelor-ka, shahaadada mastarka, warqad xilliyeed | Hada qor waraaqo
Qoraalka cirfiidka. Wadatashi. Tarjumaadaha.
Amarada degdega ah
Customization lacag la'aan ah
Waxaan ka caawinaynay ardayda inay wax qoraan in ka badan 18 sano
Darajada Bachelor , Muxaadarooyin macallin ah , Shaqada guriga
Sida aan arbeiten
Waxaad codsaneysaa dalab aan qasab ahayn si aad u hesho kharashyada amarkaaga.
Waan kula soo xiriiri doonnaa oo waxaan abuuri doonnaa mid aad qarsoodi u ah, oo ka hadlaya
Kadib helitaanka qayb ahaan bixinta, shaqadu way bilaabmaysaa.
Waxaad heli doontaa bixinta qayb ahaan. Tallaabada 3 & 4 waa lagu celceliyaa illaa inta hawshu ka dhammaato si aad u qanciso.
Qiimaha iyo waqtiyada dirista
Waxaan kaa caawinaa waraaqaha eray bixinta, teesaraha bachelor-ka, teesaska sayidka, bandhigyo iyo waxyaabo kaloo badan!
ku saabsan 30 nooc shaqada
Bilaash La qabsashada
In ka badan 600 Mawduucyada
Shaqada badanaa la codsado
Waqtiga dirida oo kabilowda: 7 maalmood
Waqtiga dirida oo kabilowda: 14 maalmood
Waqtiga dirida oo kabilowda: 21 maalmood
dib u eegista ardayda
Maamuluhu wuxuu awooday inuu iga helo macluumaadka lagama maarmaanka ah si shaqadu si wanaagsan u socoto.
Hans	21 / 10 / 2021 shahaadada bachelor
Nidaam dhammaystiran, uma maleyn jirin inay fududdahay. Wax kasta oo si fiican loo qaabeeyey, ilo la siiyay, xigasho sax ah oo la hirgaliyay iyo xitaa xaashida daboolka ayaa lagu daray.
Beluga	23 / 08 / 2021 shahaadada Masterka
Uma baahnin gabal shaqo oo kaliya, kaliya dhowr niyad iyo shaybaar oo tusaale u ah - taasi waa sida saxda ah ee aan helay waana ay i caawisay wax badan.
ugu dambayntii adeeg aan lacagta ka soo bixin jeebabka ardayda saboolka ah
farxad markale. caawimaad fudud oo dhakhso leh sidaa darteed waan jeclahay
Waad ku mahadsantahay soo gudbinta
waad iga damiintay marka xigta goor hore ayaan imaan doonaa
Waraaqaha waxay si sax ah u bixiyaan caawimaadda aan u baahanahay. Waan isku halleyn karaa, taasi muhiim ayey ii ahayd aniga.
Waraaqaha kaliya kuma siinayaan adiga hal waaxda tayada lagu kalsoonaan karo loogu talagalay adiga Shaqada guriga, shahaadada bachelor oder shahaadada Masterkalaakiin sidoo kale mid tifaftire khibrad leh, midka adeegga qoraalka fiican yeelasho.
Tifaftirayaashayadu waa aqoonyahan xirfad leh Aqoonyahanno iyo macallimiin shahaadooyin haysta oo sannado badan khibrad u leh meelo badan oo takhasus leh.
Toos & xiriir deg deg ah
Waxaad had iyo jeer la xiriirtaa kuwa naga go'an Kooxda taageerada. Adeegga macmiilku aad buu muhiim ugu yahay Warqadaha.
caqli gal waa mudnaanta koowaad ee waraaqaha. Marka lagu daro isgaarsiinta qarsoodiga ah iyo qarsoodiga ah, waxaan si adag ugu hogaansanahay ilaalinta xogta.
Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo shaqada luqadda qalaad? Dhib malahan! Kooxdayada khibrada leh way ku farxi doonaan inay kugula taliyaan kuweenna Mawduucyada iyo luqadaha.
Waad ku kalsoonaan kartaa shaqada sayniska ee Papernerds. Waxaan leenahay tilmaamaha tayada adag qorayaashayada. Xatooyo malahan, cawaaqib xumo malahan.
Shaqo kasta oo cilmiyaysan waxaa dib u aqrinaya akadeemiyaadka labaad ee la shaqeynta qoraaga. Barnaamijka xatooyada ayaa hubinaya gaar ahaaneed.
Waxaan jeclaan lahaa in shaqadayda la ii qoro
Sidee qaali u tahay in la qoro warqad aqooneed?
Kharashaadka shaqada ee Papernerds waxay kuxirantahay dabcan aagga shaqadu tahay in lagu qoro, nooca shaqada ay tahay, sida waraaqda ereyga, shahaadada bachelorka ama shahaadada mastarka iyo inta bog, tixraacyo, iwm. .
Sidaa darteed way adag tahay in la sameeyo bayaan sax ah oo ku saabsan qiimaha sicirka guryaha.
Muddo intee le'eg ayaad u baahan tahay inaad qorto waraaqaha?
Dhammaantood waxay kuxiran yihiin: Waxay kuxirantahay nooca shaqada iyo qoto dheerida cilmi baarista suugaanta, tafatirayaashayada ayaa awooda 7-31 maalmood u baahan Warqad qoraal ah oo ka kooban 5 bog ayaa lagu qori karaa toddobo maalmood, laakiin qoraalka takhasuska leh ee leh bogagga 60 wuxuu qaadanayaa waqti dheer.
Maaddaama waraaqa-yaashu ay sidoo kale la shaqeeyaan qorayaasha dhabta ah ee ka kala yimid qaybo badan oo tacliimeed, waxaa habboon, gaar ahaan sababo tayo leh, in la bixiyo mid faahfaahsan oo ku jira waqti fiican baaritaan gaarsiin.
Waxay kuxirantahay waqtiga, qaabeynta shaqsiyeed dabcan sidoo kale halkan ayaa lagu sameyn karaa.
Waa maxay dammaanadaha aan ku haysto waraaqaha xaashiyaha ah?
Waan ognahay sida ay muhiimka u tahay in shaqadaada loo abuuro si hufan, adeecsan iyo luqad ahaan si sax ah.
Taas awgeed, waxaan ballanqaadeynaa shaqo kasta oo ay qabtaan shaqaale xirfad leh, sida Muxaadarooyin, Baaraha oder Tifatirayaasha qoran ka dibna uu qoray a Hubiyaha qishka waa la hubiyaa.
Intaas waxaa sii dheer, shaqadii aad amartay looma isticmaali doono daabacaaddaada taariikh dambe. Marka waan dammaanad qaadaynaa 100% ikhtiyaar iyo tayowaad ku qanacsan tahay. Waxaan sii wadaynaa hagaajinta illaa aad ka qanacsan tahay.
Yaan la xiriiri karaa haddii aan wax su'aalo ah qabo?
Waxaan leenahay a Taageerada macaamiisha, oo aad ka heli karto su'aalo guud oo ku saabsan muddada warqadda, qoraalka shahaadada bachelor-ka, shahaadada mastarka iwm.
Haddii aad horeba xiriir ula lahayd shaqaalaheenna, macallinka, takhtarka ama cilmi-baaraha laguu qoondeeyey sidoo kale wuu kula joogi doonaa.
Xogtee ayaad iga rabtaa aniga?
Dabcan, su'aashani waxay sidoo kale kuxirantahay nooca, baaxadda iyo maadada.
Asal ahaan, si kastaba ha noqotee, macluumaadka soo socda ayaa had iyo jeer waxtar noo leh:
Tirada bogagga iyo ilaha
shuruudo dheeri ah (tijaabooyin u gaar ah, baaritaanno, iwm.)
sheegasho u gaar ah
Masuulkaaga ayaa waliba si faahfaahsan kuugu sheegi doona qalabka aad u baahan tahay.
Maxay yihiin adeegyada aad bixiso?
Waxaan kaa taageernaa dhammaan dhinacyada nolosha tacliinta:
Waxaa qoray Shaqada guriga, Darajada Bachelor, Muxaadarooyin macallin ah, Qormooyinka PhD iyo theses
Tababarida midka saxda ah Joog
Ku caawi Cilmi baarista suugaanta
Ku taageer Su'aalaha ku saabsan curinta qoraallada tacliinta, Qaabaynta, Xigasho, Tixraacyo
Ku caawi Cilmi baaris iyo talo soo jeedin mowduuc ah
Taageerada haddii dhibaato dhacdo